» Dhageyso:Shaqsi u eg Gabre oo kamid noqde xildhibaanada iyo shacabka oo sheegay in gabre xildhibaan noqde?Badweyntimes.com
Dhageyso:Shaqsi u eg Gabre oo kamid noqde xildhibaanada iyo shacabka oo sheegay in gabre xildhibaan noqde?
Ayadoo maalinimadii shalay xildhihaano tageersan musharax madaxweyne Xasan Sheekh maxamuud ay kushireyn hotelka weyn ee SYL ayaa lasheegaya in halkaasi lagu arkay shaqsi u eg generaal gabre oo ahaa taliyaashii ciidamada itoobiya.
Baraha bulshada ayaa siweyn habeenimadii xalay ilaa shalay siweyn loo hadal haayay muqaalka ninkaas kasoo dadka kusheegeyn in oo yahay generaal gabre balse xildhibaankaas oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in oo ahayngabre balse oo yahay xildhibaan qaran.
HALKAAN KADHAGEYSO CODKA
Xildhibaanka ayaa sheegay in oo ladhashay taliyaha ciidamada asluubka bashiir goobe waxaana asaga lagu magacabaa khaasim waxaana oo sheegay in oo ahayn itoobiyaan oo yahay qof soomaali.
« Warbixinta Ka HoreysayDhageyso:Kursiga Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo noqday kan ugu gor-gortanka badan ee Ololaha Doorashada
Warbixinta Xigto »Muqaal:Hotelka saldhiga u ahaa musharixiinta isbadal doonka oo aan laga seexan iyo musharixiinta oo jeegagii ugu badnaa baxshe hada…